ကန်ဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအပေါ် ထိခိုက်မှုနည်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားမှုကု? - Yangon Media Group
ကန်ဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအပေါ် ထိခိုက်မှုနည်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားမှုကု?
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်မှု ကြောင့် နိုင်ငံအပေါ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ထားသည့်အခြေအနေအား ပြည်သူအား ပွင့်လင်းစွာချပြရန် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက သဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၂၈ ရက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရာတွင် သဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
”အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ တန်ဖိုးတိုးတက်လာမှုအရ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာမှု အပါအဝင် မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံအ ပေါ်ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည့် စီးပွား ရေးအခြေအနေ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က လတ်တလော အရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေနှင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ် စေရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြရန် သဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦး ကျော်စိုးလင်းက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် GDP တွက်ချက်ရာတွင် ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အခြေခံနှစ်ကို ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အစား ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း၊၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုပေါင်းသီးနှံစိုက်ပျိုး ဧက ၄၉၈၈၂၉၁၅ ရှိပြီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၅ဝ၇ဝဝ၃၉၉ ဧကရှိသဖြင့် ၈ဝ၈၄၈၄ ဧက လျော့နည်းသော်လည်း ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ရန် လျာထားခြင်းအပေါ်တွင်လည်း ပြည်သူလူထုကို ပွင့်လင်းမြင်သာ စွာချပြရန် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက သဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းတွင် ပုံမှန် ဈေးနှုန်းအရ စီးပွားရေးတိုးတက် မှုနှုန်း ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း ၁၃၆ဝ ကျပ်၊ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေတွင် နိုင်ငံပိုင်အခန်း၌ ကျပ်သန်း ၈၄၇၆ ဒသမ ၃၂ ဘီလီယံ၊သမဝါယမ အခန်းတွင် ကျပ်သန်း ၄ ဒသမ ၆၆ ဘီလီယံ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခန်းတွင် ကျပ်သန်း ၂၄၈၆၅ ဒသမ ၁၉၆ ဘီလီယံ၊ ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၃ဝဝ သန်းနှင့်သွင်းကုန်တန်ဖိုးကန်ဒေါ် လာ ၁၅၈ဝဝ သန်းရရှိရန်လျာထားကြောင်းသိရသည်။
''အဆိုတော် အသစ်လေးတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲကလာတဲ့ အဆိုတော်လေးတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကို ကိုယ်ချင်းစ??